FAKANA AN-KERINY AN’I AKYL CASSAM : Mamofompofona volabe ny famotsorana an’i Akyl Cassam
Mbola ao anatin’ny tebiteby tanteraka ny fianakavian’i Akyl Cassam sy ny fianakaviamben’ny Karàna eto Madagasikara. 7 février 2018
Raha tsiahivina, dia ny zoma 2 febroary no nisy naka an-keriny tao Salazamay Toamasina i Akyl Cassam Chenaï ka mbola tsy hita popoka hatramin’izao. Fakana an-keriny iray andro mialoha ny famotsorana an’ i Kalidas mpandraharaha karàna ao Antananarivo. Raha tsiahivina, dia ny alarobia 17 janoary no nisy naka an-keriny tao Antanimena Antananarivo i Kalidas.
Ny harivan’ny sabotsy 3 febroary izy vao navotsotr’ireo mpaka an-keriny. Nahatratra 2 tapitrisa euros ny vola notakian’ireo mpaka an-keriny tamin’ny fianakaviany. Vola izay tsy fantatra na naloa tokoa na tsia.
Ho an’ny mpanara-baovao ao Toamasina, dia miahiahy amin’ny mety hisian’ny fifandraisana eo amin’ny mpaka an-keriny an’i Kalidas tany Antananarivo sy ny mpaka an-keriny an’i Akyl Cassam tao Toamasina. Mandeha ny tombantombana hoe : navotsotra i Kalidas mba hahafahana mifehy tsara ny fihazomana an’i Akyl Cassam. Nanjary fomba fiadin’ireo mpaka an-keriny eto Madagasikara ankehitriny ny mitazona elaela an’ireo olona nalaina an-keriny alohan’ny hitenenana sandan’ny famotsorana. Miha mitebiteby ny fianakaviana ka mahasahy sandam-pamotsorana ambonimbony kokoa.
Ho an’i Kalidas tao Antananarivo, dia naharitra 16 andro be izao no nihazoman’ireo mpaka an-keriny azy. Ahiana ho tonga amin’izany ihany koa ny an’i Akyl Cassam. Tazomina elaela vao mitaky volabe. Mamofona volabe araka izany izao fakana an-keriny ny tale jeneralin’ny orinasa Scim izao. Ny angom-baovao voaray ny talata 6 febroary no nahalalana fa mbola fihainoana aloha no natao an’ireo olona 8 nosamborina ny alahady lasa teo ary efa nalefa nody avokoa ny ankamaroany.
Araka ny efa nitaterana azy teto, dia itambaran’ny polisy sy zandary ny fanadihadiana ka eny amin’ny biraon’ny sampana misahana ny fikarohana heloka bevava eo anivon’ny zandariamariam-pirenena no natao foiben-toeran’ny fanaovana fanadihadiana amin’izao raharaha Akyl Cassam izao. Manamafy ny mpitandro filaminana iray izay manaraka akaiky ity dosie fakana an-keriny ity fa mbola ho maro ireo olona hohenoina amin’izao raharaha izao. Mitohy ihany koa ny fisavana trano an’ireo olona mety ho ahiahiana nandray anjara mivantana na ankolaka.